ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Shanghai Comi Aroma Co. , Ltd.
ပျံ့နှံ့ Glass ကိုပုလင်း
အလှကုန် Dropper ပုလင်း
Comi အနံ့ Catalog
COMI AROMA သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများထောက်ပံ့သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှန်ဟိုင်းတွင်ရုံးချုပ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Xuzhou ရှိစက်ရုံ။ စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် High Flint Glass ထုတ်ကုန်များအတွက်လူသိများသည်။ သို့သော်ယနေ့တွင်မီးဖို ၂၅ ခုကျော်ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြီးမားသောပမာဏများ၌ပုံစံ၊ အရွယ်အစားနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုမှာယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလှကုန်၊ ပျံ့နှံ့သော၊ ရေမွှေး၊ ဖန်ပြွန်နှင့်ဆေးဝါး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံနှင့်စတော့ပစ္စည်းများသည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားပြီး Amber, Green, Flint နှင့် Cobalt Blue တို့တွင်ပုံမှန်ရရှိနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့် COMI AROMA သည်ဖန်ပုလင်းများ၊ ကွန်တိန်နာများနှင့်အပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသောအပိုပစ္စည်းများ (dropper caps, mist pumps, sprayer pumps, aroma fiber fiber, rattan sticks, toppers and caps) များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလှအပနှင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းသည့်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးဆန်းသစ်သောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများထုတ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်မီကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစက်ရုံများအားလုံးသည်အမေရိကန်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီး US FDA အသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် COMI AROMA သည်အဆုံးရေနွေးငွေ့ဖြင့်ဖုံးအုပ်သည့်နည်းပညာ၊ အအေးမှုတ်ဆေးဖုံးအုပ်နည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ဆီလီကွန်ကြွယ်ဝသောကုသမှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်စတုရန်းပေဂိုဒေါင်သည်ဖောက်သည်များ၏ချက်ချင်းကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်အချိန်တိုအတွင်းထိန်းသိမ်းရန်ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းသန်း ၅၀ ကျော်သိုလှောင်ထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။
COMI AROMA ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးစားသည်။
နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောထုပ်ပိုးခြင်းခရီး၊ COMI AROMA နှင့်ပျော်ရွှင်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်း!
ထည့်ပါ - အမှတ် ၁၅၀၀ တန်တင်ဝေလမ်း၊ ဂျင်ရှန်ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်း၊
တယ်လီ0086- (0) 516-83202223
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော oi ပေါ်တွင်အမှတ်အသား၏အဓိပ္ပာယ်ကို ...
Featured ထုတ်ကုန်များ - Sitemap - မိုဘိုင်းဆိုက်